Dhisidda guri | January 2020
Sida loo dhiso guri kuleyl xagaaga adoo isticmaalaya gacmahaaga
Editor Ee Doorashada January 22,2020
Ugu Weyn Ee Dhisidda guri
Digaaga digaaga ee dacha waa ganacsi aad u caan ah. Nooc kasta oo shimbir ah waa in uu leeyahay meel gaar ah oo u gaar ah oo loo ilaalin karo oo la daryeeli karo. Sidaa darteed, waxaan go'aansannay inaan kuu sheegno dhammaan marxaladaha dhismaha qaabkan, iyo sidoo kale shuruudaha guriga. Naftaada dhismaha ma aha shaqo adag.
Waa maxay nadaafad, is-saaridda sanduuq khaas ah oo loogu talagalay beerista digaagga
Haddii aad tahay dhalid xayawaan, waxaa muhim ah in aad daryeesho beerahooda sii kordhaya. Xaaladdan oo kale, broder wuxuu u yimaadaa samatabbixinta. Dabcan, waxaad ka iibsan kartaa sanduuqa dukaanka ama suuqa, laakiin waxay leedahay kharash aad u sareysa. Qodobkani waxaanu sharxi doonaa sida loola dhaqmo gacmahaaga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhisidda guri 2020